Filazana ara-dalàna | Bezzia
Bezzia an'ny tambajotra vavahady News Blog, fananan'ny orinasa Tambajotra Aterineto AB 2008 SL, CIF: B85537785, misy adiresy ao amin'ny C / Mirasierra 14-1 2º B, 28410 Manzanares el Real, Spain.
Afaka mifandray amin'ny:
ny mailaka fifandraisana (Amin'ny) bilaogy (Point) fr
ny telefaona (+34) 902 909 238
ity taratasy fifandraisana ity
Fiarovana angona manokana
Tompon'andraikitra amin'ny fitsaboana
Antsipirian'ny fifandraisana amin'ny tompon'andraikitra: Miguel Ángel Gaton miaraka amin'ny mailaka hifandraisan'i miguel (at) actualitasblog (dot) com
Zo fiarovana anao
Ahoana ny fampiasana ny zonao: Azonao atao ny mandefa fifandraisana an-tsoratra any amin'ny biraon'ny voasoratra anarana amin'ny AB Internet Networks 2008 SL na amin'ny adiresy mailaka voalaza ao amin'ny lohatenin'ity fampandrenesana ara-dalàna ity, ao anatin'ireo tranga roa ireo ny kopian'ny ID-nao na antontan-taratasy famantarana mitovy amin'izany, hangataka ny fampiharana ny zon'ny manaraka:
Zo hangataka fidirana amin'ny angona manokana: azonao atao ny manontany amin'ny AB Internet Networks 2008 SL raha toa ka mitsabo ny angon-drakitrao ity orinasa ity.
Zo mangataka fanitsiana (raha sendra diso izy ireo).
Zo hangataka ny famerana ny fitsaboana anao, raha izany dia tazomin'ny AB Internet Networks 2008 SL izy ireo amin'ny fampiharana na fiarovana ireo fitakiana.
Zo hitsipahana fitsaboana: Ny AB Internet Networks 2008 SL dia hampitsahatra ny fikirakirana ny angon-drakitra araka ny fomba ilazanao azy, raha tsy noho ny antony manery na ara-dalàna na ny fampiharana na fiarovana ny mety ho fangatahana dia tsy maintsy tohizina.
Manan-kery amin'ny fampidinana data: raha sanatria tianao ny hikirakira orinasa iray hafa, ny AB Internet Networks 2008 SL dia hanamora ny fitaterana ny angon-drakitrao amin'ny mpitantana vaovao.
Zo hamafana ny angona: ary raha tsy maintsy atao ara-dalàna izy ireo dia hamafa aorian'ny fanamafisana anao.
Modely, endrika ary fampahalalana bebe kokoa momba ny zonao: Pejy ofisialin'ny Sampan-draharaha Espaniola misahana ny fiarovana ny angona
Fahafahana manaisotra ny fanekena: Raha toa ka nanome alalana ho an'ny tanjona manokana ianao dia manan-jo hisintona izany amin'ny fotoana rehetra, nefa tsy misy fiatraikany amin'ny ara-dalàna ny fitsaboana mifototra amin'ny fanekena alohan'ny nisintonana azy.
Ahoana ny fomba itarainana amin'ny Fahefana mifehy: Raha heverinao fa misy ny olana amin'ny fomba fikirakiran'ny AB Internet Networks 2008 SL ny angon-drakitrao, dia azonao atao ny mitarika ny fitakianao any amin'ny Security Manager an'ny AB Internet Networks 2008 SL (voalaza etsy ambony) na fahefana fiarovana data izay mifanitsy, ny maha Sampan-draharaha Espaniola misahana ny fiarovana ny angona, ilay voalaza ao amin'ny raharaha Espana.
Zo hohadinoina ary fidirana amin'ny angona anao manokana
Amin'ny fotoana rehetra dia manan-jo hijerena ianao, hanarenana, hanafoana anarana ary / na hamafa, amin'ny ankapobeny na amin'ny ampahany, ny angona voatahiry ao amin'ny tranokala. Mila mandefa mailaka amin'ny contacto@actualidadblog.com fotsiny ianao ary mangataka izany.
Data tsy voaangona: Ny data tsy mitambatra dia tazonina tsy misy fe-potoana famafana.
Data an'ny mpamandrika amin'ny alàlan'ny mailaka: Manomboka izao dia misoratra anarana ny mpampiasa mandra-pisoratany anarana.
Data an'ny mpamandrika amin'ny newsletter: Manomboka izao dia misoratra anarana ny mpampiasa mandra-pisoratany anarana.
Fampahalalana ampiasain'ny AB Internet Networks 2008 SL ho an'ny pejy sy mombamomba ny tambajotra sosialy: Hatramin'ny fotoana anoloran'ny mpampiasa ny fanekeny alohan'ny hanesorany izany.
Fiarovana miafina sy data
AB Internet Networks 2008 SL dia manolo-tena amin'ny fampiasana angona, ho hajao ny tsiambaratelo ataon'izy ireo ary hampiasa azy ireo mifanaraka amin'ny tanjon'izy ireo, ary koa hanaraka ny adidiny hitandrina azy ireo ary hampifanaraka ny fepetra rehetra hialana amin'ny fanovana, fahaverezana, fitsaboana na fidirana tsy nahazoana alàlana, mifanaraka amin'ny fepetra voalazan'ny didim-panjakana 1720 / 2007 tamin'ny 21 Desambra, izay mankato ny Fitsipika momba ny fampandrosoana ny lalàna voajanahary 15/1999 amin'ny 13 Desambra, Fiarovana ny angona manokana.
Manome toky ianao fa marina ny angona manokana omena amin'ny alàlan'ireo endrika, ka voatery hampita fanovana amin'izy ireo ianao. Toy izany koa, manome toky ianao fa ny fampahalalana rehetra omena dia mifanaraka amin'ny tena toe-javatra misy anao, fa vaovao izy io ary marina.
Ho fanampin'izay, tsy maintsy havaozinao amin'ny fotoana rehetra ny angon-drakitrao, ho tompon'andraikitra amin'ny tsy fahatokisana na ny lainga omena sy noho ny fahasimbana naterak'izany tamin'ny AB Internet Networks 2008 SL amin'ny maha tompon'ity tranonkala ity anao, na amin'ny antoko fahatelo noho fampiasana ny voalaza.
Fanitsakitsahana ny filaminana
Ny AB Internet Networks 2008 SL dia mandray fepetra fiarovana ampy tsara hamantarana ny fisian'ny virus, ny fanafihana mahery vaika ary ny tsindrona kaody.
Na izany aza, tokony ho fantatrao fa ny fepetra fiarovana ny rafitry ny solosaina amin'ny Internet dia tsy azo itokisana tanteraka ary, noho izany, ny AB Internet Networks 2008 SL dia tsy afaka manome antoka ny tsy fisian'ny viriosy na singa hafa mety hiteraka fanovana eo amin'ny rafitry ny solosaina. (rindrambaiko sy fitaovana) an'ny Mpampiasa na amin'ny antontan-taratasin'izy ireo elektronika sy rakitra ao anatiny.
Na eo aza izany, ny manandrana manome antoka ny fiarovana sy tsiambaratelo momba ny angon-drakitrao manokana, ny tranonkala dia manana rafi-panaraha-maso fiarovana mavitrika izay mitatitra ny asan'ny mpampiasa tsirairay sy ny mety ho fanitsakitsahana ny fiarovana ny angon-drakitra mpampiasa.
Raha misy lesoka hita, AB Internet Networks 2008 SL dia manao ampahafantaro ny mpampiasa ao anatin'ny fe-potoana maharitra 72 ora.
Fampahalalana angoninay avy amin'ny mpampiasa sy ny ampiasainay izany
Ny vokatra sy serivisy rehetra atolotra ao amin'ny tranokala dia manondro ireo forme contact, form form ary form mba hanaovana fisoratana anarana ho an'ny mpampiasa, fisoratana anarana amin'ny mailaka ary / na fividianana mividy.
Ity tranonkala ity dia mitaky ny fahazoan-dàlana alohan'ny mpampiasa hanodinana ny angon-drakitra manokana momba ny tanjona voalaza.
Manan-jo hanafoana ny fanekenao taloha ianao amin'ny fotoana rehetra.
Firaketana ny hetsika fanodinana data
Web sy fampiantranoana: Manana tranokala SSL TLS v.1.2 ny tranokala izay mamela ny fandefasana angon-drakitra manokana amin'ny alàlan'ny endrika fifandraisana mahazatra, ampiantranoina amin'ireo mpizara izay nifaneken'ny AB Internet Networks 2008 SL avy amin'ny Occentus Networks.
Angona nangonina tamin'ny alàlan'ny tranonkala: Ny angona manokana angonina dia iharan'ny fitsaboana mandeha ho azy ary ampidirina ao anaty rakitra mifanaraka aminy izay fananan'ny AB Internet Networks 2008 SL.
Handray ny IP-nao izahay, izay hampiasaina hanamarinana ny niandohan'ny hafatra mba hanomezana anao vaovao, fiarovana amin'ny fanehoan-kevitra SPAM ary hahitana ireo tsy fanarahan-dalàna mety hitranga (ohatra: ny antoko mifanohitra amin'izany tranga izany dia manoratra amin'ny tranokala mitovy IP), arak'izany toy ny angona mifandraika amin'ny ISP anao.
Toy izany koa, azonao atao ny manome anay ny angon-drakitrao amin'ny alàlan'ny mailaka sy fomba fifandraisana hafa voalaza ao amin'ny faritra ifandraisana.
Fomba famoahana hevitra: Ao amin'ny tranonkala dia misy ny fahafahan'ny mpampiasa mametraka hevitra ao amin'ireo zavatra navoakan'ny tranonkala. Misy cookie iray izay mitahiry ny angon-drakitra omen'ny mpampiasa azy ireo ka tsy mila mampiditra azy ireo isaky ny fitsidihana vaovao ary koa ny adiresy mailaka, anarana, tranokala ary adiresy IP angonina ao anatiny. Ny tahiry dia voatahiry ao amin'ny mpizara Occentus Networks.
Fisoratana anarana ho an'ny mpampiasa: Tsy avela izy ireo raha tsy angatahina amin'ny fomba mazava.
Fomba fividianana: Mba hidirana amin'ny vokatra sy serivisy atolotra amin'ny magazay an-tserasera, ny mpampiasa dia manana fividianana fividianana fepetra mifehy ny fifanarahana voalaza ao amin'ny politikantsika izay ilana ny fampahalalana momba ny fifandraisana sy ny fandoavam-bola. Ny tahiry dia voatahiry ao amin'ny mpizara Occentus Networks.
Manangona vaovao momba anao izahay mandritra ny fizotry ny fizahana ao amin'ny magazay. Ity fampahalalana ity dia mety misy, ary tsy ity ihany, ny anaranao, ny adiresy, ny mailaka, ny telefaona, ny antsipirian'ny fandoavam-bola ary ny hafa ilaina handefasana ny baiko.
Ny fitantanana an'ity angona ity dia ahafahantsika:
Mandefasa fampahalalana lehibe momba ny kaontinao / kaonty / serivisinao.
Valio ny fangatahanao, ny fitarainanao ary ny fangatahanao famerenam-bola.
Mandrosoa ny fandoavam-bola ary alaviro ny fifanakalozana sandoka.
Amboary sy tantano ny kaontinao, omeo serivisy ara-teknika sy mpanjifa ianao ary hamarino ny mombamomba anao.
Ho fanampin'izay, azonay atao ihany koa ny manangona ireto fampahalalana manaraka ireto:
Ny angona momba ny toerana sy ny fifamoivoizana (ao anatin'izany ny adiresy IP sy ny tranokala) raha manafatra ianao, na raha mila manombana hetra sy vidin'ny fandefasana miorina amin'ny toerana misy anao izahay.
Notsidihina ny pejin'ny vokatra ary nojerena ny atiny raha mavitrika ny fotoanao.
Ny hevitrao sy ny hevitry ny vokatra raha misafidy ny handao azy ireo ianao.
Adiresy fandefasana raha mangataka vidin'ny fandefasana ianao alohan'ny hanaovana ny fividianana mandritra ny fotoam-pivorianao.
Cookie tena ilaina mba hitazomana ny atin'ny saretinao mandritra ny fotoana ihetsehanao.
Mailaka sy teny miafin'ny kaontinao hahafahanao miditra amin'ny kaontinao, raha manana izany ianao.
Raha mamorona kaonty ianao dia tehirizinay ny anaranao, ny adiresinao ary ny nomeraon-telefaoninao hampiasa azy ireo amin'ny baiko ho avy.
Fomba fisoratana anarana amin'ny Newsletter: AB Internet Networks 2008 SL dia mampiasa ny serivisy fanaterana newsletter Sendgrid, Feedburner na Mailchimp, izay mitahiry ny angon-drakitra mailakao, ny anarana ary ny fanekena ny famandrihana. Azonao atao ny misintona amin'ny mailaka amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny rohy manokana hita eo amin'ny farany ambany amin'ny entana azonao
Email: Sendgrid no mpanome tolotra mailaka anay.
Hafatra: Ny AB Internet Networks 2008 SL dia tsy manome serivisy amin'ny alàlan'ny fandefasan-kafatra mailaka toy ny WhatsApp, Facebook Messenger na Line.
Mpamatsy tolotra fandoavambola: Amin'ny alàlan'ny tranonkala dia azonao atao ny miditra, amin'ny alàlan'ny rohy, mankany amin'ny tranokalan'ny antoko fahatelo, toa ny PayPal o mivatra, mba handoavana ny vola omen'ny AB Internet Networks 2008 SL. Tsy misy fotoana azon'ny mpiasan'ny AB Internet Networks 2008 SL mahazo ny antsipirian'ny banky (ohatra, ny nomeraon'ny carte de crédit) izay omenao an'ireo ankolafy fahatelo voalaza ireo.
Votoatiny tafiditra ao anaty tranokala hafa
Ny lahatsoratra ao amin'ny Internet dia mety misy atiny tafiditra (ohatra horonan-tsary, sary, lahatsoratra sns). Ny atiny natsofoka tamin'ny tranokala hafa dia mitovy amin'ny fomba nitondrany ny mpitsidika ny tranokala hafa.
Ireo tranonkala ireo dia mety manangona angon-drakitra momba anao, mampiasa cookies, mametraka ny fanarahan-dia avy amin'ny antoko fahatelo ary manara-maso ny fifandraisanao amin'ny atiny tafiditra, ao anatin'izany ny fanarahana ny fifandraisanao amin'ny atiny tafiditra raha manana kaonty ianao na mifandray amin'io tranonkala io.
Serivisy hafa: Ny serivisy sasany omena amin'ny alàlan'ny tranokala dia mety misy fepetra manokana miaraka amin'ny fepetra manokana momba ny fiarovana ny data manokana. Tena ilaina ny mamaky sy manaiky azy io alohan'ny fangatahana ny serivisy resahina.
Tanjona sy ara-dalàna: Ny tanjon'ny fikirakirana ity angona ity dia ny hanomezana anao ny fampahalalana na serivisy angatahinao aminay.
Fanatrehana amin'ny tambajotra: AB Internet Networks 2008 SL dia manana mombamomba ny sasany amin'ireo tambajotra sosialy lehibe amin'ny Internet.
Tanjona sy ara-dalàna: Ny fitsaboana izay hotanterahin'i AB Internet Networks 2008 SL miaraka amin'ireo angon-drakitra ao anatin'ireo tambajotra voalaza etsy ambony ireo dia, indrindra, ilay avelan'ny tambajotra sosialy amin'ny mombamomba ny orinasa. Araka izany, AB Internet Networks 2008 SL dia afaka mampahafantatra, rehefa tsy raràn'ny lalàna izany, ireo mpanaraka azy amin'ny fomba rehetra avelan'ny tambajotra sosialy momba ny asany, fampisehoana, tolotra ary koa ny fanomezana serivisy ho an'ny mpanjifa manokana.
Fitrandrahana angona: Na izany na tsy izany, ny AB Internet Networks 2008 SL dia hanaisotra angona avy amin'ny tambajotra sosialy, raha tsy hoe ny faneken'ny mpampiasa no azo manokana sy an-karihary mba hanaovana izany.
Rights: Rehefa, noho ny tena toetoetran'ireo tambajotra sosialy, ny fampiharana mahomby ny zon'ny fiarovana ny angon-drakitra dia arakaraka ny fanovana ny mombamomba azy manokana, ny AB Internet Networks 2008 SL dia hanampy anao ary hanome torohevitra anao hahatratrarana izany. ny azo atao.
Processeur ivelan'ny EU
Email. Ny serivisy mailaka AB Internet Networks 2008 SL dia atolotra amin'ny alàlan'ny serivisy Sendgrid.
Tambajotra sosialy. Ny AB Internet Networks 2008 SL dia mampiasa ny tambajotra sosialy amerikana YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, Flipboard izay anaovana famindrana angon-drakitra iraisam-pirenena, toetra amam-pahaizana sy teknika mifandraika amin'ny tranokala ao amin'ireo mpizara azy ao amin'ny fa ny AB Internet Networks 2008 SL dia mandray an-tanana ny angon-drakitra izay, amin'ny alalàn'izy ireo, mpampiasa, mpamandrika na mpitety dia manolotra ny orinasa AB Internet Networks 2008 SL na mizara izany.
Mpamatsy vola. Mba hahafahanao mandoa vola PayPal o mivatra, AB Internet Networks 2008 SL dia handefa ny angon-drakitra ilaina mafy amin'ireo ho an'ireo mpikirakira fandoavam-bola ireo amin'ny famoahana ny fangatahana fandoavam-bola mifanaraka amin'izany.
Voaaro ny mombamomba anao arakaraka ny politikanay momba ny fiainana manokana sy cookies. Amin'ny alàlan'ny fampiatoana ny famandrihana na amin'ny fanomezana ny mombamomba ny fandoavam-bola, azonao sy ekenao ny politikanay momba ny fiainana manokana sy ny cookies.
Hanana ny fidirana, fanitsiana, famafana, ferana, famindrana ary fanadinoana ireo angona angonao foana ianao.
Hatramin'ny fotoana fisoratanao anarana ho mpampiasa amin'ity tranokala ity, ny AB Internet Networks 2008 SL dia mahazo alalana amin'ny: Username sy email, adiresy IP, adiresy paositra, ID / CIF ary mombamomba ny fandoavam-bola.
Na izany na tsy izany, ny AB Internet Networks 2008 SL dia manan-jo hanova, amin'ny fotoana rehetra ary tsy misy fampandrenesana mialoha, fa mampahafantatra ny fampisehoana sy ny fananganana ny tranokala toy ity fampandrenesana ara-dalàna ity.
Fanoloran-tena sy adidy amin'ireo mpampiasa anay
Ny fidirana sy / na ny fampiasana an'ity tranonkala ity dia manondro izay manatanteraka izany ny fampiasa ny mpampiasa, manaiky, manomboka izao, feno sy tsy misy famandrihana, ity fampandrenesana mifandraika amin'ny serivisy sy votoatin'ny tranokala ity.
Amin'ny fampiasana an'ity tranonkala ity, ny mpampiasa dia manaiky ny tsy hanao fitondran-tena mety hanimba ny sary, ny tombontsoana ary ny zon'ny AB Internet Networks 2008 SL na ny antoko fahatelo na mety hanimba, hampandeha na hanavesatra ny vavahady na hisoroka na izany na tsy izany, ny fampiasana ara-dalàna ny tranonkala.
Ny politikantsika momba ny tsiambaratelo dia mamaritra ny fomba fanangonana, ny fitahirizana na ny fampiasana ireo angona angoninay amin'ny alàlan'ny serivisy na pejy samihafa misy eto amin'ity tranonkala ity. Zava-dehibe ny fahafantaranao izay fampahalalana angoninay sy ny fomba ampiasainay azy io satria ny fidirana amin'ity tranonkala ity dia midika hoe fanekena ny politikantsika manokana.
Afaka mahita ianao ny fampahalalana rehetra momba ny politikan'ny cookies amin'ny rohy manaraka.
Andraikitra ara-dalàna amin'ny atiny
Ny tranonkala dia misy lahatsoratra voaomana ho fampahafantarana fotsiny na fampahalalana fotsiny izay mety tsy maneho ny toetran'ny lalàna na lalàna ankehitriny ary manondro ireo toe-javatra ankapobeny ka ny atiny dia tsy azon'ny mpampiasa ampiharina amin'ny tranga manokana.
Ny hevitra voalaza ao amin'izy ireo dia tsy voatery taratry ny fomba fijerin'ny AB Internet Networks 2008 SL.
Ny atin'ny lahatsoratra navoaka tao amin'ny tranokala dia tsy azo jerena, na ahoana na ahoana, mpisolo ny torohevitra ara-dalàna.
Ny mpampiasa dia tsy tokony hihetsika mifototra amin'ny fampahalalana voarakitra ao amin'ilay tranokala raha tsy manantona ny toro-hevitra momba ny matihanina mifanaraka amin'izany.
Zon'ny fananana ara-tsaina sy indostrialy
Amin'ny alàlan'ireto fepetra ankapobeny ireto dia tsy misy zon'ny fananana ara-tsaina na indostrialy afindra amin'ny vavahady na amin'ireo singa rehetra ao aminy, ny fananahana, ny fanovana, ny fizarana, ny fifandraisana amin'ny besinimaro, ny fanolorana ho an'ny besinimaro, ny fitrandrahana, ny fampiasana indray, voarara mazava ho an'ny mpampiasa. fandefasana na fampiasana natiora rehetra, na amin'ny fomba inona na amin'ny fomba hafa, amin'iza amin'izy ireo, afa-tsy amin'ny tranga izay avelany na omen'ny tompon'ny zony mifanitsy aminy ara-dalàna.
Fantatry ny mpampiasa ary ekeny fa ny tranokala iray manontolo, misy nefa tsy feno ny lahatsoratra, sary, volavola, rindrambaiko, atiny (ao anatin'izany ny firafitra, ny fisafidianana, ny fandaminana ary ny fampisehoana an'io), ny fitaovana audiovisual sy ny sary, dia arovan'ny mari-pamantarana, zon'ny mpamorona ary zon'olon-kafa ara-dalàna voasoratra anarana, mifanaraka amin'ny fifanarahana iraisam-pirenena izay antoko sy zon'ny fananana hafa ary lalàna any Espana.
Raha heverin'ny mpampiasa na ny antoko fahatelo fa nisy ny fanitsakitsahana ny zon'izy ireo manan-kery ara-tsaina noho ny fampidirana atiny sasany ao amin'ilay tranokala, dia tokony hampandre ny AB Internet Networks 2008 SL momba izany toe-javatra izany izy ireo, manondro:
Ny angon-drakitra manokana momba ny fahazoan-dàlana ny zon'ny olona liana dia voalaza fa nandika lalàna, na nanondro ny fisoloany ny asany raha toa ka ny fangatahana dia natolotry ny antoko fahatelo ankoatry ny antoko liana.
Lazao ny atiny arovan'ny zon'ny fananana ara-tsaina sy ny toerana misy azy eo amin'ilay tranokala, ny fankatoavana ny zon'ny fananana ara-tsaina voalaza ary fanambarana mazava izay andraikitry ny antoko liana amin'ny fahamarinan'ny fampahalalana nomena.
Fitsipika sy famahana olana
Ny fepetra fampiasana ny tranokala ankehitriny dia fehezin'ny lalàna espaniola. Ny fiteny amin'ny fanoratana sy ny fandikana an'io fampandrenesana ara-dalàna io dia Espaniola. Ity fampandrenesana ara-dalàna ity dia tsy hapetraka tsirairay isaky ny mpampiasa fa hijanona amin'ny Internet amin'ny Internet.
Ireo mpampiasa dia afaka manolotra ny Rafitry ny Mpanjifa izay ampiasain'ny AB Internet Networks 2008 SL mba hamahana ny adihevitra na fanambarana azo avy amin'ity lahatsoratra ity na avy amin'ny asan'ny AB Internet Networks 2008 SL, afa-tsy ny famahana ireo fifanolanana izay miteraka fivoaran'ny hetsika iray mitaky maha-mpikambana azy, amin'izay ny mpampiasa dia tsy maintsy mandeha any amin'ny vatan'ny fikambanan'ny fisotroana mety.
Ireo mpampiasa manana ny satan'ny mpanjifa na ny mpampiasa araka ny voafaritry ny fitsipiky ny Espaniôla ary monina ao amin'ny Vondrona eropeana, raha nanana olana tamin'ny fividianana Internet natao tamin'ny AB Internet Networks 2008 SL izy ireo, mba hiezaka hanatratra fifanarahana ivelan'ny fitsarana dia afaka mandeha ny Sehatra famahana olana eo amin'ny Internet, noforonin'ny Vondrona eropeana ary novolavolain'ny komisiona eropeana ambanin'ny Fitsipika (EU) 524/2013.
Raha toa ka tsy mpanjifa na mpampiasa ilay mpampiasa, ary rehefa tsy misy fitsipika mifehy ny hafa, dia manaiky ny hanaiky ny fitsarana sy ny fitsarana any renivohitra Madrid ny roa tonta, satria io no toerana famaranana ny fifanarahana, mamela mazava izay faritra iray hafa izay mety mifanaraka amin'izy ireo.
Izay antenainay amin'ireo mpampiasa
Ny fidirana sy / na ny fampiasana an'io na iza na iza manatanteraka ny fampiasa ny Mpampiasa, manaiky, manomboka izao, feno ary tsy misy famandrihana, ity fampandrenesana ara-dalàna ity, ary koa ireo fepetra manokana izay, raha ilaina, mameno azy io, ao fifandraisana amin'ny serivisy sy ny atin'ny vavahady sasany.
Ampahafantarina ny mpampiasa ary ekeny fa ny fidirana amin'ity tranonkala ity dia tsy midika velively, ny fiandohan'ny fifandraisana ara-barotra amin'ny AB Internet Networks 2008 SL. Amin'izany fomba izany, ny mpampiasa dia manaiky ny hampiasa ny tranokala, ny serivisy ary ny atiny nefa tsy mandika ny lalàna ankehitriny, ny finoana tsara ary ny filaminam-bahoaka. Ny fampiasana ny tranokala amin'ny tanjona tsy manara-dalàna na manimba, na amin'ny lafiny rehetra, dia mety hiteraka fahavoazana na hisorohana ny fiasan'ny tranonkala mahazatra. Raha ny atin'ny tranokala ity dia voarara:
Ny famokarana, fizarana na fanovana azy ireo, amin'ny ampahany na amin'ny ampahany, raha tsy manana alalana avy amin'ny tompony ara-dalàna izy ireo.
Ny fanitsakitsahana ny zon'ny mpamatsy na ny tompona ara-dalàna.
Ny fampiasana azy ho an'ny tanjona ara-barotra na dokambarotra.
Ny pejin'ilay tranonkala dia manome rohy mankamin'ny tranokala sy atiny hafa an'ny tompony, mpanamboatra na mpamatsy fahatelo.
Ny hany tanjon'ireo rohy dia ny hanome ny mpampiasa fahafaha-miditra amin'ny rohy voalaza sy hahalala ny vokatray, na dia tsy tompon'andraikitra amin'ny tranga hafa aza ny AB Internet Networks 2008 SL amin'ny valiny mety ho azon'ny mpampiasa amin'ny alàlan'ny fidirana amin'ireo rohy ireo.
Ilay mpampiasa mikasa ny hametraka fitaovana fampifandraisan-davitra ara-teknika rehetra avy amin'ny tranokalany mankany amin'ny vavahady dia tsy maintsy mahazo alalana voasoratra mialoha an'ny AB Internet Networks 2008 SL.
Ny fametrahana ny rohy dia tsy midika velively amin'ny fisian'ny fifandraisana misy eo amin'ny AB Internet Networks 2008 SL sy ny tompon'ny tranonkala nametrahana ny rohy, na ny fanekena na fankatoavana avy amin'ny AB Internet Networks 2008 SL momba ny atiny sy ny serivisy .
Ny asan'ny remarketing na avy amin'ny mpihaino AdWords mitovy amin'izany dia mamela antsika hanatratra ny olona izay efa nitsidika ny tranonkalantsika teo aloha ary manampy azy ireo hamita ny fizotry ny varotra.
Amin'ny maha-mpampiasa anay, rehefa miditra amin'ny tranokalanay izahay dia hametraka cookie iray fanamarihana hevitra (mety avy amin'ny Google Adwords, Criteo na serivisy hafa manome tolotra fanodinana).
Ity cookie ity dia mitahiry ny mombamomba ny mpitsidika, toy ireo vokatra izay notsidihiny na raha nandao ny sarety fiantsenana izy ireo.
Rehefa mandao ny tranonkalantsika ny mpitsidika dia mitohy ao anaty tranokalan'izy ireo ny cookie.
Fepetra hafa amin'ny fampiasana an'ity tranonkala ity
Ny mpampiasa dia manolo-tena hampiasa amin'ny fomba feno ny tranokala sy ny serivisy azo idirana ao aminy, amin'ny fanarahana tanteraka ny Lalàna, ny fadin-tseranana tsara ary ity fampandrenesana ara-dalàna ity.
Toy izany koa, mandray andraikitra izy, raha tsy alohan'ny, manome alalana an-tsoratra sy an-tsoratra ny AB Internet Networks 2008 SL hampiasa ny vaovao voarakitra ao amin'ny tranonkala, ho an'ny mombamomba anao fotsiny, tsy afaka manatanteraka fanararaotana ara-barotra ny atiny izay ananany fidirana.
Ity tranonkala ity dia mitahiry rakitra rakitra mifandraika amin'ireo hevitra nalefa tamin'ity tranonkala ity. Azonao atao ny mampiasa ny zonao amin'ny fidirana, fanitsiana, fanafoanana na fanoherana amin'ny alàlan'ny fandefasana mailaka amin'ny adiresy adiresy (at) aktblog (teboka) com.
Ity tranokala ity, ireo domains mifandraika ary tompon'ny atiny dia an'ny AB Internet Networks 2008 SL.
Ity tranonkala ity dia misy rohy mitarika mankany amin'ireo tranonkala hafa tantanan'ny antoko fahatelo ivelan'ny fikambananay. Ny AB Internet Networks 2008 SL dia tsy manome toky ary tsy tompon'andraikitra amin'ny atiny izay voaangona amin'ireo pejin-tranonkala voalaza ireo.
Raha tsy nomena alàlana avy amin'ny Express, mialoha sy an-tsoratra avy amin'ny AB Internet Networks 2008 SL, famerenana, afa-tsy ny fampiasan'ny tena manokana, ny fanovana ary amin'ny ankapobeny ny endrika fitrandrahana hafa, amin'ny alàlan'ny fomba rehetra, ny rehetra na ny ampahany amin'ny atiny ity tranonkala ity.
Voarara tanteraka ny fanatanterahana, raha tsy misy ny faneken'ny AB Internet Networks 2008 SL mialoha, izay fanodikodinana na fanovana an'ity tranonkala ity. Vokatr'izany, ny AB Internet Networks 2008 SL dia tsy handray andraikitra, na mety hitranga, avy amin'ny fanovana na fanodikodinanana nataon'ny antoko fahatelo.
Fanatanjahan-tena zon'ny ARCO
Azonao atao ny mampiasa, mikasika ny angona nangonina, ny zo ekena ao amin'ny Law Organic 15/1999, ny fidirana, ny fanitsiana na ny fanafoanana ny angona sy ny fanoherana. Noho io antony io dia mampahafantatra anao aho fa azonao ampiasaina ireo zony ireo amin'ny alàlan'ny fangatahana an-tsoratra sy sonia izay azonao alefa, miaraka amin'ny fotokopia ny ID-nao na antontan-taratasy mitovy aminao, amin'ny adiresy paositra AB Internet Networks 2008 SL na amin'ny alàlan'ny mailaka, nametaka fotokopia ny ID-nao mba: contact (at) actualitasblog (teboka) com. Alohan'ny 10 andro dia hamaly ny fangatahanao izahay hanamafisana ny fanatanterahana ny zony izay nangatahinao hampiasaina.
Ny fametrahana ny antoka sy ny andraikitra
Ny AB Internet Networks 2008 SL dia tsy manome antoka na tompon'andraikitra amin'izany, na amin'ny lafiny inona, na amin'ny karazan'antoka mety hateraky ny:
Ny tsy fahampian'ny fidirana, ny fikojakojana ary ny fandehanana mahomby amin'ny tranokala na ny serivisy sy ny atiny;
Ny fisian'ny virus, maloto na manimba fandaharana amin'ny atiny;
Ny fampiasana tsy ara-dalàna, tsy miraharaha, mamitaka na manohitra ny fampiasana an'io Fanamarihana ara-dalàna io;
Ny tsy fahampian'ny ara-dalàna, ny kalitao, ny fitokisana, ny fampiasana ary ny fahazoana ireo tolotra omen'ny antoko fahatelo ary omena ny mpampiasa amin'ny tranonkala.
Ny AB Internet Networks 2008 SL dia tsy tompon'andraikitra amin'ny fahasimbana mety hitranga noho ny fampiasana tsy ara-dalàna na tsy ara-dalàna an'ity tranonkala ity.
Sehatra eropeana hamahana ny olana amin'ny Internet
Ny Vaomiera eropeana dia manome sehatra famahana olana amin'ny Internet izay hita ao amin'ireto rohy manaraka ireto: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ny mpanjifa dia afaka mandefa ny fitakiany amin'ny alàlan'ny sehatra famahana olana amin'ny Internet
Ny lalàna sy ny fifehezana azo ampiharina
Amin'ny ankapobeny, ny fifandraisana misy eo amin'ny AB Internet Networks 2008 SL amin'ireo mpampiasa ny serivisiny telematika, hita ao amin'ity tranonkala ity, dia iharan'ny lalàna sy ny fahefana espaniola.
Ho mora tohina foana isika: Ny fifandraisantsika
Raha misy mpampiasa manana fisalasalana momba ireo fepetra ara-dalàna na fanehoan-kevitra momba ny vavahadin-tserasera ireo dia mankanesa any amin'ny contact (at) actualblog (dot) com
Ny fanekena sy ny fanekena
Nanambara ny mpampiasa fa nampahafantarina azy ireo ny fepetra momba ny fiarovana ny angon-drakitra manokana, ny fanekena ary ny fanekena ny fitsaboana azy avy amin'ny AB Internet Networks 2008 SL, amin'ny fomba sy ny tanjona voalaza ao amin'ity politika manokana ity.
Araka ny lalàna misy ankehitriny, ny AB Internet Networks 2008 SL dia tsy manao fanao SPAM, noho izany dia tsy mandefa mailaka ara-barotra izay mbola tsy nangatahana na nomen'ny mpampiasa alàlana. Vokatr'izany, amin'ny endriny tsirairay amin'ny tranonkala, ny mpampiasa dia afaka manome alalana azy ireo handray ny Gazetintsika / bulletin, na inona na inona fampahalalana ara-barotra nangatahina manokana.
Ny vokatra hatsarana irina indrindra
Jereo ny fifantenana